Calyphrox.net: 100% kusazivikanwa kubhurawuza uye iyo Yakadzika Webhu mukati memunhu wese kusvika | Kubva kuLinux
Manuel Escudero | | Zvimwe
Mhoro kune vese vaverengi, vapepeti uye vateveri ve Kubva kuLinux. Ichi ndicho chinyorwa changu chekutanga pane ino blog uye chiri chimwe chinhu chinonakidza, sezvo ini pakupedzisira ndichapa gorosi rangu rekutanga rejecha kunharaunda ino yakanaka nezvose zvayo ruzivo hub.
Nhasi ndauya kuzotaura newe nezve Calyphrox Webproxy, yepamutemo webhu kunyorera kukambani yangu Xenode Maitiro uye mashandisiro anoita chishandiso ichi iwe mukubhurawuza kwako kwemazuva ese kwewebhu.
Calyphrox ndeye online proxy izvo zvinokutendera kuti ufambe mu 100% isingazivikanwe uye yakachengeteka pasina kusiya trace kuburikidza newebhu, ndiro basa raro guru. Mamwe emakesi ekushandisa akakosha kunyora iyi mhando yeetekinoroji / kunyorera kunogona kuve:
Paunenge iwe uchida kuwana yakavharidzirwa webhusaiti kuchikoro kana kubasa
Paunenge iwe uchida kuwana zvirambidzo zvemukati chenyika yako / IP
Paunenge uchida kuwana zvingangove zvisina kuchengetedzeka zvemukati
Paunenge uchingoda kuchengeta zviitwa zvako pawebhu zvisina kuzivikanwa
Muchokwadi, chikonzero nei Calyphrox akazvarwa yaive yekuti pandakanga ndiri pakati pechikoro chesekondari kumashure muna2008, macomputer maLab akatitadzisa kuwana mamwe mawebhusaiti ekuvaraidza akadai seYouTube kana iyo yakatokanganwa (uye kune vakawanda vangangove vasingazivikanwe xD) Hi5.
Nekudaro, kukosha kweCalyphrox hakuna kumira ipapo: Nekupa mushandisi IP yakasiyana neyako (mune ino imwe kubva kuGoogle) uye nekudzivirira mafinger printa.
Calyphrox yakave iri munhoroondo yayo chishandiso chinobatsira muhondo yekuvanzika and the kuwana mahara ruzivo kune vazhinji vashandisi kutenderera pasirese uye ikozvino mune yayo nyowani vhezheni 6 ichangoburitswa isu tasarudza kubatanidza (pakati pezvimwe zvitsva) rutsigiro rwekuwana kune madomains ".Onion" (wepa Yakadzika Webhu) saizvozvo.
Izvi zvinoreva kuti zvakakwana kupinda calyphrox uye kunyora yako domain .onion mukati me URL yayo bar kuti utange "kudhizaivha" mukati mewebhu rakadzika pasina kuisa TOR kana imwe software yakafanana pane yako system.
1 Calyphrox Yakachengeteka here?
2 Yakadzika Webhu? Oo
3 Chii chimwe chinondipa calyphrox?
Calyphrox Yakachengeteka here?
Ehe saizvozvo. Paunenge uchivhura neCalphphx yako muchina haina kumbobatanidzwa mune zvemukati zvikumbiro zvaunoita iwe padandemutande.
Zvese zvemukati zvaunotsvaga / kukumbira zvinokumbirwa neimwe yeCalphrox maseva uye inozviratidza nenzira yakatarwa kwauri, kuitira kuti pasave neanogona kutsvaga izvo zvawakumbira / zvawakaita panguva yekufamba kwako uchiuya kwauri.
Kana munhu akarwisa achida kutsvaga chikumbiro chako, chekupedzisira kunobva endpoint Iyo yaungamhanyire mairi ichave iyo Calyphrox girazi server iyo yakaratidza izvo zvakakumbirwa zvemukati kwauri (kunyangwe uchifungidzira kuti uyo akarwisa akasvika panguva ino isu tisati tabvisa zvirimo zvemadhata sezvinoitwa nguva nenguva) asi hazvizombogona kuziva kubva kwakatangira chikumbiro chekutanga uye nekudaro handife ndakaziva kuti iwe (kana ndiani chaizvo wevashandisi vevamiriri) wakavhura iro peji kana kukumbira zvakataurwa zvirimo kuburikidza nebasa redu.
Izvi zvinoshanda kune zvese zvikumbiro zve zvakajairika zvemukati (pamusoro pewebhu) nezveavo kumatunhu ".Onion" (Yakadzika Webhu); Mune yekupedzisira, Calyphrox ndiye ari pamusoro pekukumbira zvemukati kuburikidza neTOR network uye anozviratidza kwauri zvinoratidzira, zvichiita kuti kubhurawuza kutonyanya kufambiswa, kwatova kwakachengeteka.
Kutaura chete nezvehunyanzvi hwako hwekuwana iyo Yakadzika Webhu, iyi nzira iri yakachengeteka kupfuura, (semuenzaniso) uchishandisa iyo Tor Browser Bundle kuwana izvo zvemukati, nekuti mune iyo kesi zvisinei kuti yakachengeteka sei tor network uye kuti yakawanda sei relays shandisa ruzivo usati wasvika pamushini wako (iwo pachawo unofanirwa kuve nekumwe kudzivirirwa pamusoro pane izvo) pakupera kwezuva komputa yako inogara iri yekupedzisira kunobva endpoint kubva iko kunogadzirwa chikumbiro cheruzivo, ne Calyphrox, chekupedzisira kunobva endpoint kubva iko kunogadzirwa zvikumbiro kunogara kuri imwe yemaseva ayo egirazi uye kusamboita komputa yako pachayo.
Yakadzika Webhu? Oo
"Yakadzika webhu, yakadzika webhu" Ini ndashandisa izwi iri zvakanyanya muchinyorwa chino. Ini handisi kuzotsvaga mumusoro we "yakadzika webhu" kana Darknet sezvo zvakawanda zvataurwa pamusoro pazvo pamusoro apa pa Kubva Linux uye vanoverengeka blogger (kusanganisira ini) vakanyora pane edu akasiyana masosi / mablog edu zviitiko zvako uye kuziva-sei pamusoro wenyaya iyi. Kana iwe usina kuziviswa nezvazvo Chii chiri chakadzika webhu, Nzvimbo yakanaka yekutanga ndipo pahukama hwandakangoisa pakati pemitsara iyi; Ivo vanokupa iwe ruzivo rwakasimba pachinhu ichi.
Chii chimwe chinondipa calyphrox?
Pakati payo, Calyphrox ndizvo chaizvo. Webproxy zvese zvewebhu yakajairika (pamusoro pewebhu) uye yewebhu yakadzika. Nekudaro, ine mashoma ekuwedzera maficha aungade, akadai se:
Kuwanika kwepamusoro (Smart mirroring)
Inopindura dhizaini yemhando dzese dzesikirini size
Yepamutemo IP Widget yewebhusaiti yako
Yepamutemo muchinjika-chikuva maapplication (kukura)
Uyezve mamwe ma greats goodies… Kuzviongorora zvese, ndinokukoka kuti uverenge zvinyorwa zvekuburitsa zviri pamutemo nechekuno Zvakanaka, kana iwe uchifarira kushandisa / kusvika pakuziva Calyphrox, usakanganwa kutora rwendo rweiyo peji yepamutemo kubva proxy mu:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Calyphrox.net: 100% kusazivikanwa kubhurawuza uye iyo Yakadzika Webhu mukati memunhu wese kusvika
Iwe unofanirwa kuve neadblock (?) Akaremara ndinokutendai zvikuru uye ini ndichazviedza pane akati wandei mawebhusaiti. :]
Ehe, senge chero proxy, inobata yakawanda traffic uye sezvo isiri iyo yemukati peji, iyo chete nzira yekuita mari ndeye iwo ma ads. Zvisinei hazvo isu tinoedza kuvaita akakosha kushambadza, hazvina kuita sekunge isu tinongoisa adsense ipapo uye ndizvozvo ... Muchokwadi, izvozvi kuti ivo varikuishandisa, tiri kugadzirisa ese ese marudzi emametri ehupenyu hwevashandisi vese 😉
Frank Alexander akadaro
Chinangwa chako chinorumbidzwa, asi iwe unofanirwa kuziva kuti TOR-BROWSER chirongwa cheFBI, pamwe neCIA neNSA, vanobata vatengesi vanowira mukusazivikanwa kwavo kwenhema. Kune rimwe divi, zvakanyanya kunetsa kudzora ECHEL0N, hurongwa nehungwaru hwekunyepedzera hunobata nharembozha yepasi rese kuti ibatsirwe neAmerican / Chirungu.
Kana iwe uchinyatsoda kuvhura maziso ako, huya kuno http://gutl.jovenclub.cu http://owasp.org/index.php/Discusión
ONA: Kujekesa, vazhinji vacharamba kuti TOR-BROWSER yakachengeteka, kuti inobva kuEFF- electronic frontier foundation, yaita mari yedhijitari BITC0IN, seyedzo yemagariro yemari yeramangwana, muchidimbu, ivo kwete izvo isu zvavanopenda.
Kana Ixquick kana kutanga peji, kana duckduckgo, kana epicsearch, kana metacrawler uye mamwe ma metasearch enjini haazvivanze nekuti anochengetedza zvido zvegore, uye gore iri nechimwe chinhu chinganzi "chakachengeteka".
Paive neyekare metasearch injini ine yekunyepedzera njere: open-site.org asi vakaivhara uye chekupedzisira chandasiira ndechekuti: Zapmeta.it zapmeta.fr zapmeta.nl kana chete http://zapmeta.com
Pindura kuna Frank Alexander
Hezvino izvo, Zvino naCalphrox hauchazoda iyo TOR Bhurawuza yakagadzirwa neFBI neNSA 😉
Pindura kuna nusr
Kunze kwechiziviso chinogumbura, zvese zvakanaka.
Ini handina kukwanisa kuishandisa. Zvinonditora kuenda kuGoogle peji iro rakavharirwa nenyika yangu.
Zvino nyadzisa! : / Ini ndanga ndisingazive zvauri kutaura ... Ehe, proxy inomhanya pane Google sevhisi inonzi "Google App Injini" uye zvinosuruvarisa ISP kune Google kana rimwe remazita aro kumaseva uko kunoshanda sevhisi. Muchiitiko ichocho kudivi iri isu takasungwa maoko edu kubva kuushandisa iwe unofanirwa kushandisa imwe proxy (Privoxy + TOR semuenzaniso) izvo zvinondiita reverend upenzi ... (kana padanho repurogiramu an «zvisina basa kudzokorora» haha) Hmm, iko kudzvinyirira hapana muganho chii kusuruvara.
amm zvinonzwika zvakanaka kwazvo, asi ini handingashinga kuishandisa mune rangu basa, ivo vanonyanya kuyamwa, uye mune imwe yeiyo iyo kana vakwanisa kunditsvaga hahaha bye chikafu 😛 hahaha
Chirongwa chinonakidza asi iwe unofanirwa kuve nezvinhu zvakati wandei zvekutarisa:
1. Ruzivo rwacho rwakanyorwa here pakati pePC yangu neserura? Panyaya yekuve asina kunaka, zvaizonzwisisika kuishandisa kana ndikarasikirwa nekusazivikanwa kwandinopihwa neWebhu Webhu, nekuti zvese zvandaizoita zvaizove pane maseva eCalyphrox, ndiko kuti, iwe waigona kuona zvandinoita kana kwete pa iyo Yakadzika Webhu uye wedzera njodzi yekutsvaga chiitiko icho munhu anoita mairi. Muchiitiko chekuvharidzirwa, iwe unokwanisa kuwana kwazviri, izvo zvinobvisa kusazivikanwa zvakare.
Ini ndinodzokorora, ichiri kunakidza, asi ini ndinosarudza kubatanidza zvakananga kune Zvakadzika Webhu kuti "ndivimbise" kusazivikanwa kwangu. Mufaro!!
Kwakanaka kutaura, ndinopindura:
Ehe, iro ruzivo iwe raunopfuura neCalphphx rakavharirwa mu "mapeji akaremberedzwa" uko inobvumidzwa mune zvakajairika zvemukati. Iyo huru peji re proxy seakadaro haina 100% yakavharidzirwa mupfungwa yekuti kune maviri ekunze zvinhu (2 css uye 1 js) izvo zvichiri kutakurwa neyakajeka HTTP asi maererano nekufamba kwakadai mune iyo mamiriro ewebhu pamusoro, Zvese zvirimo zvinogona kuwanikwa nenzira yakavharidzirwa yakavharidzirwa pamusoro peHTTPS. kune rimwe divi, proxy inodzokorodza zvirimo neyakavanzika uye zvimwe zvinhu zvakaita se css nemifananidzo zvinochengetwa se "pure data" (isina chirevo chaicho kana kushandiswa kwemunhu) mudhatabhesi papuratifomu yedu. Sangano iri mukati meDB rinoshanda chete kusvikira izvo zvawakumbira zvaratidzwa kwauri uye zvorega kuvapo. Hatina mukana wekuwana chero chinhu chaunotarisa kana chaunosiya mu proxy. Seimwe yekuwedzera chiyero chekuchengetedza, chero marekodhi akasiyiwa (emaakashandurwa mabheti) akachengetedzwa muDB anodzimwa nguva nenguva. Izvi zvinodaro nekuti kana iyi yekuchenesa byte isingaitwe (iyo kunyangwe isingabatsire vanhu, vanozadza nzvimbo paHDD) iyo proxy ingazadza.
Saka, nemazwi akapusa, Ehe, kubhurawuza kwako kwakanyorwa neCalphphx. uye Kwete, hapana munhu anowana izvo zvaunowana kuburikidza nemumiriri, zvachose.
Kana iri bhurawuza, chaizvo nekuda kwemuenzaniso wako ndeyekuti Calyphrox yakachengeteka zvakanyanya. Paunenge uri kushandisa Calyphrox, iyo chete komputa irikushandisa iyo yakadzika webhu mumaziso e chero munhu ndeye Calyphrox server. Kana iyo FBI kana chero munhu aigona kutyora chero chinhu kuti awane nzvimbo yemumwe mushandisi akawana, chinhu chekupedzisira chavangape ndechekuve neIP yeCalphrox server uye kwete nemushandisi zvakadaro, nekuti izvo zvirimo hazvina kumbobvira zvadhanilodhwa. kumuchina wako zvakananga paunoshandisa proxy, asi inogara mune proxy. Muchokwadi, kana iwe ukaona iyo JS (saka kutaura) yeiyo peji iwe yawakawana kuburikidza necalyphrox, nzira hadzisi dzepakutanga, asi dzakafambiswa. Zvakaoma kutsanangura muenzaniso unoshanda asi muchidimbu, iyo proxied JS iyo iwe yaunopinda kuburikidza necalyphrox ingadai isina nzira yekuburitsa nzvimbo yako nekuda kwenyaya dzakasiyana dzekuti proxy inoshanda sei, kusanganisira iyo yakatsanangurwa nyaya kuti mune iyo kesi, iwe muchina uri kwete yekupedzisira sosi yekupedzisira yeruzivo asi proxy akadaro.
Kwazisai, ndiri kungonyora kuti ndikuudze kuti nekuda kwekunetseka kwako, kumwe kwekuvandudza kwatichangobva kuita kune proxy yaive HTTPS nekusarudzika muchiitiko chose, kubva panguva yaunopinda webhusaiti yepamutemo uye uchitsvaga. Mhinduro yako yaive yakakosha mhinduro yeapp yekambani yangu uye ndinoda kukutendai 🙂
PS Unogona here kundipfuudza yako twitter? Zuva rakanaka.
Iyi sevhisi, inoita senge iri yechokwadi kwandiri, ine kufarira semumiriri, kupfuudza kusefa kweyunivhesiti yako kana isingakutenderi iwe kuona zvinonyadzisira, semuenzaniso. Asi, kuvanzika kune zvakawanda kupfuura izvozvo. Calyphrox haisi iyo isingazivikanwe yekuvhura sevhisi (ndoda 100% sekutaura kunoita zita).
Munzvimbo zhinji dzepasi, kuvanzika kwakakosha zvakanyanya zvekuti unoisa hupenyu hwako panjodzi. Vadziviriri vekodzero dzevanhu muChina, Middle East, nyika dzeArabhu, nyika dzinoverengeka dzeLatin America, nyika zhinji dzeAfrica nezvimwewo. vanoisa hupenyu hwavo panjodzi vachishandisa internet kusimudzira hutongi hwezvido zvevanhu kana kodzero dzevanhu nedzenyika munyika dzavo. Hazvina basa (kana kuita) kukuudza kuti proxy inovimbisa kuvanzika kwako. Kune izvo ini ndinongokurudzira chete VPN uye / kana TOR.
Ona kuti munyori mumwechete anoti "Google inodzora uye inoichengetedza mumapurazi ayo evharesi", ichiisa Google sechivimbiso chekuvanzika (izvi hazvina maturo). Kana Google iri kudivi remuvengi kudunhu iri. Iyo Google server inounganidza zvese zvikumbiro zve IP yako (uye sekuziva kwako kuti inoteedzera uye inoenda yakananga kuNSA dhatabhesi) ergo, ZERO PRIVACY.
Kwete, Google haisi "garandi yekuvanzika" usashandise mazwi angu ... Iyo sevha yeGoogle ingori garandi yeAVAILABILITY (zvekuti panogara paine proxy, kuti haina kuguta zvakanyanya nezvimwewo) Chii chinonzi garandi yehukama ndiyo nzira yekufungidzirwa, uko iyo calyphrox server inomiririra komputa yako kunetiweki iwe paunotsvaga nemumiriri wedu. Komputa yako haina kumbobatanidzwa. Kana iri nyaya yakadzika yewebhu, calyphrox inogadzira kubatana kuburikidza neTOR kwauri uye nekuratidzira zvirimo pane server yayo, kuitira kuti usangove iwe haubatanidzwe, asi iwe unoramba uri zana muzana risingazivikanwe nekuda kwekudzivirirwa kweTOR uye proxy, inova iyo uyo anobuda sa "ndiani akawana izvo zvemukati" pachinzvimbo chako, hautoonekwe muchikumbiro.
Hei kana ini ndikadzima adblock… iwo "makambani" haafanire kukwanisa kunditevera?
Mubvunzo wakanaka, mhinduro ndeiyi:
Nekudzima adblock, pane peji remumwe proxy iwe unorasikirwa nekusazivikanwa kwako zvishoma kubva ku "google analytics". Icho chiyero chakakosha kuti ugone kuA) Kuita mari proxy uye B) kuziva uko traffic inobva nekuvandudza zvimwe zvinhu zvepuratifomu,
Mumapeji akasimbiswa kumisa Adblock haina kukosha nekuti A) Bhawa kurudyi haina kushambadzira sezvakadaro zvinokambaira uye B) Kunyangwe zvikaitika, sezvo urikutsvaga kuburikidza nemumiriri, kunyangwe pasina adblock unoramba uri 100% asingazivikanwe kuvonga kune mumwe proxy.
Ingoimisa AdBlock uye unakirwe !!!
Zvakanaka! mubvunzo, unogona kushandiswa kuwana nzvimbo dzakavharika munzvimbo (USA -> Mex). Ini ndoda kuwedzera yakavanzika yeNetflix chiteshi paRoku yangu, asi ini handina VPN.
PaAdSense, ndinofunga vanofanirwa zvakare kushandisa firita yeGhostery.
Nezve wako mubvunzo: Iye proxy izvozvi haasati achishanda seVPN zvakananga kune zvinhu zvakaita seNetflix. Hazvisi izvo kuti haugone, zvinongova kuti Netflix inoda makuki uye kuvabvumira mukati mezvinhu zvakagadziriswa zvinogona kuva njodzi yekuvanzika. Tiri kutarisa icho chakasarudzika chimiro chekusunungurwa mune ramangwana.
Kana iri Ghostery, ndakaiyedza izvozvi mu chrome yangu uye neyakagamuchirwa, haidzivise kushambadza kwangu, saka ini handione yakawanda dambudziko kuti mushandisi ave nayo. Muchokwadi, iyo firita iyo calyphrox inayo yakazvimiririra nerudzi rweadblocker uye inoona kana imwe software ichivanza kushambadzira zvakadaro, nekuti ndizvo chaizvo zvatinoda kudzivirira. Ghostery haivahwande, saka hapana dambudziko.
Mhoro! Ndiri kungonyorera kuti ndikuudze kuti ini ndatoona zvawanga uchitaura nezveGhostery (ine anti-js firita) hahaha, yakagadziriswa! Mhinduro yako inokosheswa uye yakatibatsira kunatsiridza app yedu
Zvakanakisa, zvinongogadziridza chete kana kushambadza kukaiswa pamusoro pewebhu, iyo webhu inofanirwa kupera panotanga kushambadzira div, zvikasadaro kuwana kune izvo zvinhu zviri kurudyi (pamapeji ivo auto-dimension segoogle .com hazvigoneke kuwana sarudzo pane kurudyi)
Kutenda nekuona iri dambudziko! ichagadziriswa munguva pfupi 😉
Dambudziko rakagadziriswa mune iyo nyowani nyowani, sezvo iwe uchizoona kana iwe ukatanga kushandisa proxy kubva ikozvino zvichienda mberi ... Mhinduro yako yave yakakosha kuCalyphrox. Ndotenda zvikuru.
Chishandiso chakanakisa. Ndiri kunyatsofara nezvazvo uye kubva zvino zvichienda kune yangu yandinoda rondedzero. Kuti ndikupe zano, parizvino iri iro rega peji mune rese internet kwandakagumisa adblock. Ndinovimba uchaenderera mberi neiri rakanakisa chirongwa uye ndichave ndakateerera nhau dzauri kuunza (kunyange uchipa mukana weTor network ndechimwe chinhu icho, pachacho, chinogumira pane chakakwirira). Parizvino, chimwe chinhu chandingade kukubvunza ndechekuti iwe uchagadzira chinyorwa pano kana imwe saiti inotsanangura maumbirwo nekugadziriswa kwezvivakwa zvawakagadzira kuti peji rishande. Ini ndinofunga zvingave zvinonakidza uye isu tese tichazvikoshesa kwazvo.
Ini ndinotaura zvakare dambudziko randakave ndichiyedza iyo peji kutsvaga muGoogle. Kutsvaga chero chinhu kusvetuka capcha iyo google inoisa kana ichinge yaona kufungira traffic. Izvi zvinowanzoonekwa kana iwe uri kushandisa chishandiso chekushandisa pachako zvegoogle kana kana uchishandisa musanganiswa we dorks ane njodzi. Muchidimbu, apo google kugura kunoitwa. Ini handizive kuti chii chiri chikonzero kana kana iwe uchikwanisa kuzvigadzirisa (pamwe imhosva yegoogle). Mushure mekuzadza iyo capcha, peji 404 rekukanganisa rinobuda. Ini ndakambozviedzawo neduckduckgo uye ndine matambudziko zvakare. Handizive kana zvakafanana zvichaitika nemamwe mainjini ekutsvaga. Chero zvazvingaitika, haina kunyanyisa.
Pakupedzisira, ndinokukorokotedzai zvakare nebasa guru ramakaita uye ndinovimba kuti chirongwa ichi chinokufambirai zvakanaka.
Hupenyu hwakareba nekubudirira.
Ndatenda zvikuru nemhinduro yako, waona hombe yakakosha bhagi. Parizvino tiri kuunganidza mushandisi mhinduro kunyatsogadzirisa zvikanganiso uye dambudziko iri raunotaura richagadziriswa mumashure mezuva nebhatani rekutsvaga
Ndiri kufara kwazvo kuti ndaibatsira. Ndinovimba unoramba uchivandudza mune ramangwana uye kuti iwe unowana kuzivikanwa iwe kwakakodzera.
Dambudziko rekutsvaga rakagadziriswa mune nyowani vhezheni yeCalyphrox (iwe uchaiona kana iwe ukapinda peji) neayo proxy yekutsvaga injini. Sezvo zvawacherekedza zvakatibatsira mukugadzirwa kweapp, ndinoda kukutendai 🙂
Ini ndinoona chirongwa ichi chinonakidza, asi ini ndinoona mibvunzo miviri, yefilosofi-technical, iyo inogona kunetsekana:
1. zvakavanzika uye zvakavanzika bhizinesi kuti uwane mari hazviwirirane. Chinhu chekuita mari kuratidza maAdsense mireza? !!! (kubva kuGoogle / NSA) mukuvhura "zvakachengeteka" ... zvinonzwika zvinotyisa. Uye zvakare, sekuratidzwa kwenyaya yeLavabit, NSA haisi kupusa, kungave iwe uri Trojan yedu chaiyo (Microsoft, Apple, Facebook, Google, nezvimwewo) kana isu tinonyudza bhizinesi rako (zvakanyanya kutyisidzira kuenda kujeri mu KUSHANDISA)
3. Iwe pachako unoti: «Ehe, proxy inomhanya pane sevhisi yeGoogle inonzi" Google App Injini "uye zvinosuruvarisa kuti ISP pane Google kana mumwe wezita rayo vanopa mazita kumaseva anobva kusevhisi iyi» !!!!! Google seIPP yebasa rakachengeteka rekubhurawuza kupesana mu termini, sezvakaratidzwa mumwedzi ichangopfuura nenyaya yese yeSnowden / NSA.
Iwe hautambe uine zvakavanzika. Iwe unofanirwa kubheja pane yeruzhinji, isingazivikanwe webhusaiti, yekupedzisira-kumagumo yakavharidzirwa padiki pePGP nhanho. Parizvino yakanakisa ndeye TOR, uye inofanirwa kuve nzvimbo yekutanga yekuvandudza.
kana pgp nhanho nezvose, ngatidzokerei padandemutande uye sezvinei kuti mifananidzo chete inogona kuoneka: D, nekuti mavhidhiyo anofanirwa kuteedzera iwe nezvezvinyorwa zvekodzero copyright
"chiremera" chirevo pamusoro pekuchengetedzwa uye kuvanzika pamambure, kunoitwa nemunhu anofambisa neInternet Explorer uye pasi peWindows 8 - kwaziso.
Iyi inonzi ad hominem nharo. Nenzira, zvirinani ndinovimba iwe waiziva kuti ie ndiyo yakachengeteka browser pasi peWindows uye iyo inogara ichikunda pahack festivals.
kuchengetedzeka uye kuvanzika muWindows hakuchina kugona kwetekinoroji uye nezvematongerwo enyika, ndingati ontological. Kubva panguva iyo kodhi yeOS ndeyekuchengetedza uye yakavharwa, chengetedzo yako nekuvanzika zviri mumaoko eMicrosoft nehurumende yeUnited States. Mune mamwe mazwi, HAPANA kuchengetedzeka uye kuvanzika muWindows, hazvimboiti, kuti kodzero yehunhu neyevanhu inoendeswa kune epasi rose nehurumende. Izvi hazvichapanikirwi nemunhu wese munharaunda yeGNU / Linux, kubva kuStallman neTorvalds, kusvika kune vasina ruzivo rwevanters. Ini ndinoremekedza kushandiswa kweWindows, asi iwe unofanirwa kungoziva nezvekodzero dzakadzingwa. Mushandisi weLinux anogara ari mugari, haatombori chidzidzo, uye hatiregerere kana kuregedza kodzero dzevanhu.
Kana zvasvika pakusazivikanwa uye kuvanzika, chengetedzo inopfuura kupfuura yechitatu-bato kuwana.
Izvo zvinoratidzwa (kunyangwe paine vachiri avo vanosarudza kutaura kuti zvinhu zvepanoid) izvo MS zvakabvumidza uye zvakatotsigira kuendesa kwega data.
Saka kuti toti kureva kuti, ndiyo bhurawuza rakachengeteka kwazvo pasi pe windows (sekunge yakamhanya natively mune chimwe chinhu) iri kunze kweiyo chikamu.
Kuvanzika uye kuchengetedzeka hazvina kufanana, chengetedzo kugona kugona kurwisa malware kurwisa kubva pawebhu, kuvanzika ndechimwewo chinhu. Uye sezvo ini ndichifamba neakaundi gmail account, neakaundi account yangu yakavhurika, Skype yakavhurika, hangout yakavhurika, nezvimwe, zvese zvaunotaura nezvega zvinoita kunge benzi, dai ndaida zvakavanzika ndaisazoshandisa internet.
Mukomputa, iyo pfungwa yekuchengeteka ine mativi ayo ekuvanzika uye kusazivikanwa.
Pfungwa dzepamoyo dzeichi, kuvimbiswa, kudzora kwekuwana, kuvimbika kweruzivo, kuwanikwa kweruzivo, kuvanzika kweruzivo.
Haisi zvese zvine malware (semuenzaniso, zvemagariro mainjiniya, izvo zvisingade Hardware kana software).
Uye hongu, hongu, iwe haufarire zvakavanzika, uye ese masevhisi ane chokwadi chekushandisa pasina password, uye muzviitiko apo chirongwa chinoda icho, unochishandisa, asi unochishambadza paFacebook, hongu.
zvawataura hazvina musoro, nei ndichiisa password paFacebook? Zvakare, hapana kana sevhisi idzi dzinogona kushandiswa pasina password.Chinhu chimwe chete kusanetseka nezve zvakavanzika uye chimwe chinhu ndechekuti iwe uri "jekiseni". Zvakadaro handina chekuvanza, kana rimwe zuva account yangu ikabiwa, ivo vaingozoona mapenzi emaimeri kubva kugmail kana mabhuku. Zvinhu zvakakosha zvePP zviri mune imwe account isiri yangu.
Izvo hazvipesane, nekuti uyu ndiye proxy. uye se proxy chero komputa (kunyanya imwe kubva kuGoogle) inoshanda mushe mushe. Paunenge uchishandisa Calyphrox, hapana chinoitwa nemushandisi wekupedzisira chiri "mukutamba" kana "chiripo" nekuti iyo data haina kuchengetwa muchishandiso kutanga nayo. Kana mumwe munhu akacherekedza chiitiko chako iwe uchinge uchishandisa proxy, ivo vaizogara vachiwana komputa yeGoogle (uye haizombovi yako) pavanosvika pakadzika pakadzika pakatangira chikumbiro. Sezvandataura muchinyorwa, komputa yako haina kumbobatanidzwa.
Zviri nyore, kana iwe uchida kuzvinzwisisa zviri nyore:
Izvo zvaunoita kana zvausingaite kuburikidza neCalyphrox hazviwanike nenzira inozivikanwa pawebhu. Zvese zvinhu zvinopihwa mhosva pane yaAzazepeki iyo iri proxy server, hapana munhu anomboziva nezve hupenyu hwako mune chimwe chikumbiro nekuti nekushandisa calyphrox urikushandisa imwe komputa pachinzvimbo chako.
Ini zvakare ndinoona kuti:
1. kubatana pakati peIP yangu uye http://calyphroxy.appspot.com/ Haisi kunyange HTTPS, ndiko kuti, haina kunyangwe yakavharidzirwa zvishoma. Zviripachena kuvhura uye kusefa traffic, saka zvese zvikumbiro pakati peIP yangu uye calyphroxy.appspot.com zvinobata.
2. kuita whois kuna calyphroxy.appspot.com http://whois.domaintools.com/appspot.com Tinogona kuona kuti IP iri muCalifornia (nzvimbo yakaipa yeserura yakachengeteka) uye zvakare, dura ndereGOOGLE:
Kunyoresa Sangano: Google Inc.
Kunyoresa Guta: Mountain View
Kunyoresa Nyika / Dunhu: CA
Registrant Post Code: 94043
Kunyoresa Nyika: US
Zvese izvi hazvipe runyararo rukuru rwepfungwa kune avo vanonyatsoda kusazivikanwa kubhurawuza.
Kwakanakisa kuonga, aya aive matambudziko angu mune yakataurwa yapfuura. Kana chero panguva ipi yakatarwa mumwe munhu achizobatana neTOR network, imo nekuti ivo vanoda kuvanzika. Sei mumwe achizobatana kuburikidza neyechitatu bato kuTOR? Zvese izvo zvingaite kuwedzera njodzi isingakoshe kune yangu yakavanzika.
Ini ndinowana iro zano richinakidza sewe proxy yewebhu, asi ini handifunge kuti zviri nyore senzvimbo yekuwana TOR nekuda kwekuvanzika.
Mhoro! Inonakidza kwazvo hurukuro dzese nezve chengetedzo yemakomputa uye nevamwe, asi pakupera kwezuva, zvese zvinovira kune izvi:
Izvo hazvisi zvekuti ndiani anotambira, kana kuti ndiani ISP kana iko kunoshanda, kupera kwezuva Calyphrox ichiri kuchengetedzeka nepfungwa yekusimbiswa. Zvese "zvinokundikana" uye kunetsekana kwakaratidzwa nezvakataurwa pamusoro apa zvinonetsa kune proxy server chete, komputa yako haina njodzi. Kubhurawuza kuburikidza ne proxy kunogona kufananidzwa nekuve kuseri kweruzhinji NAT.
Muchidimbu, chero chinhu chinga "kutyorwa, kushandiswa" kana chero rimwe izwi raunoda kushandisa, hachiise njodzi yakanangana nechero wevashandisi, ndoda kumakomputa avo nekuti iye chete ari panjodzi pano ndiyo sevha ye proxy, iyo yatisingakwanise kuwana (Google inodzora uye inoidzivirira mumapurazi ayo evharesi). Chero zvazvingaitika, kana mumwe munhu akashandisa aya "matambudziko" aunotaura, havangambokwanisa kuwana chero data remushandisi nekuti (kutanga ne), haina kana kuchengetedzwa mukushandisa.
Kutsvaga kuburikidza neCalphrox ndiko, (kana iwe uchida kuzviona seizvi) nzira yekuve nerunyararo rwepfungwa rwekushandisa internet "pachinzvimbo cheimwe komputa" uye usambove wako, kuitira kuti kana mumwe munhu achikwanisa kuibira kana kuita chimwe chinhu. kwazviri, njodzi huru Chaunotarisana nacho semushandisi wekupedzisira (padanho rekuvanzika kana chero chinhu) kurasikirwa nehukama nemumiriri uye kuenderera nehupenyu hwako.
Ndatenda nekutaura nezvazvo 😉
Yakagadziriswa mune yekuvandudza mukati meiyo vhezheni iri online izvozvi, zvakare nekutenda nekucherechedza, zvave zvichibatsira 😉
Tuiqué? Uye chii ichocho? Ndiri internet yekumira 🙂
Iwe unongoda kugadzira ADDON kuti uve nayo mu firefox uye / kana chromium bar.
Izvo zviri mune ramangwana zvirongwa 😉
Ini ndaiziva nezve sevhisi iyi uye ndinogona kukuudza kuti handina chokwadi ... ndinokukurudzira kuti ushandise dzimwe mhinduro panzvimbo peiyi.
Wakave neruzivo rwakashata here munguva yakapfuura? kana iwe uchingozvitaura kungotsika-tsika (nekuti chirevo chako hachina kunyorwa zvakanaka) ndinobvunza nekuti kana uchizvitaura nechikonzero saka ndingade kuziva nezve dambudziko rako kuti udzivise izvo zvakakonzera iwe "kusachengeteka" munguva yakapfuura neichi chitsva shanduro.
ndeye freebsdick xdd, inogara ichitsika-tsika, yakafanana neiyo XD
Ko kambani yangu inogona here kuteedzera kunyorera?
Mune network ine yepamusoro notch chengetedzo uye yekutevera kutonga, yako kambani inogona kuona kuti iwe wakawana Calyphrox uye ndizvozvo. Izvo zvaunoita mushure mekurova bhatani re "go" mushure mekupinda yako URL mune proxy yekufambisa bar haina kuzivikanwa sezvako zvikumbiro.
Pakupera kwezuva, njodzi huru yeku "kubatwa" iri mukukanganisa kwevanhu (kuti iwe une peji rakavhurika rakavhurwa apo maneja wepasi anoita kutenderera semuenzaniso uye ivo vanozviziva)
Rad & Kufona akadaro
Ini handikwanise kurodha Calyphrox kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti, Kaspersky Internet Security inoti ihwo hunyengeri URL uye unovharira kurodha pasi. Chii ichi ??
Pindura Rad & Call
Pamwe nekuti ... Izvo hazvitore? hahahaha harisi "chirongwa" iri webhu kunyorera, ndiani anoziva zvauri kurodha pasi asi haisi calyphrox, nekuti haina kutorwa saizvozvo, ingo pinda pawebhu inoonekwa pamusoro mupositi kuti uishandise.
Zvakanaka ndinoti zvakaringana zveguevonadas !!! ... uye isingazivikanwe nyaya dzekubhurawuza sezvo pasina kana rebound in replicas emaseva akasiyana siyana pasirese iwe waunogona kuvanda paInternet pane imwe nguva kana imwe ivo vanokuredza iwe saizvozvo pasina zvimwe, nekudaro izvo chete A sevha inogona kuvaita kuti vasaone iyo yeruzhinji IP yenzvimbo yako yepanyama kwaakazvitaura kana iyo chaiyo kero mauri nePC yako zviri nyore kukunda uye sekutaura kwakaita shamwari ikoko iwe kana muridzi wako weSeva kana iwe uchikwanisa kuwana kune yekufambisa info yevashandisi uye inogona kunyorwa uye chero chaunoda asi iwe seAdmin kana uchikwanisa kuwana nekushandisa izvo sezvaunoda ini ndine maSeva akati wandei uye ingori iyo chete yeEthics kanenge mune angu kesi ini handina zviite kunze kwekuraira kutonga nenzira yemushandisi.
Parizvino, rega kurota kuti hapana chinopunyuka paInternet, zvese zvinogara zviripo uye zvirokwazvo pane imwe nguva iwe unozviwana uye unoziva kwazvakabva. Zvakare, ari nyore Chrome mabhurawuza eGoogle, Firefox, uye nevamwe vazhinji vese vanosiya rekodhi kune vanogadzira kiyi dzakashanyirwa nzvimbo uye zvimwe zvakawanda uye zvimwe, izvi zvese zvatove kuitwa neyakareruka webhusaiti pasina kuenda kumberi kupfuura ino blog inopa iyo data pakati pevamwe yemuongorori yakashandiswa uye nehurongwa hwekushandisa, saka usataure kuti uku kubhurawuza pasina munhu anoziva hahahahaha KUKWazisa !!!!! …… kune izvi unofanirwa kudzokorora pamaseva mazhinji uye usashandise ako maInternet network Byeeee….
Calyphrox haisi pane yakajairika yakatsaurwa sevha, iri chiitiko cheGoogle App Injini, isu tine zero mukana kune ruzivo rwevashandisi. Kune rimwe divi, kune Zvakadzama Webhu nyaya, maitiro ekudzokorora senge iwo aunotaura anoshandiswa, kuburikidza ne tor network nekumisikidza uye sekujairika kubhurawuza, proxy ine akawanda anodzokorora magirazi anogoneswa pazvinenge zvichidikanwa.
100% isingazivikanwe uye yakachengeteka? aha, kunyanya nekuti hazvizorega iwe uchizvishandisa kana iwe uine js kana adblock block….
Izvo hazvina chekuita neyakavanzika proxy kana chengetedzo pane proxified mapeji. Zvakare, kana iwe uine hanya nemumwe munhu "achikutevera" pane peji reimba, unogona kugara uchishandisa "Usateedzera" pasina kubvisa kushambadza.
ICHOKWADI CHINONYANYA KUNYANYA KUTI UWANE MUNHU ANOFUNGA ZVAKAWANDA KUTI VANOFUNGA NEZVO RUBATSIRO, ASI NDIWE UNOGONESESA, NDOKUTI KUFUNGA ZVIKURU KUTI UVE NEIYO YAKADZIDZWA DZIMWE mega HURE KWAVO NGUVA.
NDINOKWANISIRA KUKURATIDZA UYE KUPA UYE KUGADZIRA CHINHU CHINONYANYA KUNOBATSIRA KWAVANHU VANHU VANOGONESA NEVANOGONESA UYE ISITI Ruzivo, NERUSUNUNGUKO RWOKUDZIDZA.
Guido Ibarra akadaro
Ndine urombo uye isu tingaite sei kuti tishandise iyo yakadzika webhu
Pindura Guido Ibarra
Ndatenda zvikuru nekugovana ichi chishandiso chine simba nesu tese.Ndinokushuvira zvakanaka ...
Ndiri kuona kuti peji racho harisisipo, nekuti ini ndakaedza kubatanidza uye peji rino harisi kuwanikwa.
Ndine mimwe mibvunzo uye kazhinji mune zvakajairika network izvi zvakatobviswa kana kuti hazvisi kungoburitswa. Chinangwa changu kuziva chokwadi kana kumbotsanangurwa.
Pindura kuna pedro gonzalez
Ndinoitora sei? inoshanda windows?
inoshanda sei nyaya yescript semuenzaniso google. Unogona here kuvharira maAddons, zvese zviri Java mafuremu mafuremu, nezvimwe?
ysmael villavicencio akadaro
Manuel, nhanho nhanho yekupinda muDW ndapota, ini ndiri mutsva mune izvi, unogona here?
Pindura kuna ysmael villavicencio
Anodiwa shamwari, ndinoona basa rako richinakidza kwazvo. Ndiri kugara mudunhu reTucuman, Argentina uye ndinoda kuziva kana ndichigona kuishandisa nemawindows 7. Ini ndinoshandisa internet kubva kune yakavakidzana server iyo inondipa ini netambo. Uyu muridzi anondibhadharisa kunyorera pamwedzi anotambira Internet nendege kubva kudunhu reCórdoba uye paanosvika kumba kwake kanyanga anotengesa sevhisi netambo. Iyo inononoka asi inoshanda. Kubva kumba kwake ane vangangoita gumi nevaviri vaanotengesa kubva kune yake tambo server. Chinja kuita chimwe chinhu chinoshandiswa naCalphphx? Chii chakadzika webhu? Ndinofanira sei kubatana kuti ndiishandise? Kubva ikozvino, ini ndinotenda mhinduro. Kana zvisina kunyanya kubvunza email yangu
Mhoroi, ndinongoda kuziva kana paine chero mutengo uye ini ndinogona kuimisa kana ndabva kubasa.
Ndatenda zvikuru nemupiro wako Manuel, ndine mubvunzo pamusoro peCalyphrox wandinoda kuti undipindure: pandinopinda blogger bloggspot, ini ndichaonekwa mukambani yekushanya yemunyori weblog rakanzi kana ndikashandisa Calyphrox? Ndatenda.
GeeTeeDee, yakanaka, yakajeka uye yakanaka basa maneja
Tora matanda ako kumashure muArchLinux senge muDebian kana mamwe ma distros ane syslog-ng